Booliska oo diwaangelin ku sameeyay dawarsadaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Booliska oo diwaangelin ku sameeyay dawarsadaha
La daabacay onsdag 16 december 2015 kl 10.09
L`aanta wararka ee Ekot ayaa cadeeyay in u boolisku wakhtii gaadhaya sannad ah ku wadeen baadhitaaan iyo diwaangelin dawarsadaha Iswiidhan ku sugan, iyaga oo aan dembi galin.
Macluumaadkan ayaa dabeetana la geliyay diwaan ballaadhan.
-Sawir ayuu boolisku naga qaaday, dabeetana wexey na weydiyen dhowr suaalood oo la xidhiidha sababta aanu halkan u joogno, ayey sheegtay Maria oo ah gabadh ka timid waddanka Roomaania, balse iminka Iswiidhan ku dawarsata.
Mario iyo Daniel ayaa iyaguna arrinkan waayo aragnimo u leh.
-Anaga na sawir ayuu boolisku naga qaaday, kaadhka aqoonisga ah na wey na wydiyeen, ayuu jidhi Mario.
Ciidamada sirdoonka ee booliska ayaa sannadkii ugu dembeeyay baadhitaan weyn ku sameeyay dawarsadaha hadda Iswiidhan jooga. Badankood ayaa ka yimid waddamada Roomaania iyo Bulgaaria. Baadhitaankan oo u boolisku wadey muddo sannad ah ayaa laga rajeeynayey in u cadeeyo in ay iskooda u dawarsanayaan amba laga dambeeyo.
Bilowgii bisha diiseembar sannadkan ayuu boolisku shaaciyay baadhitaan cadeeynaya in ay jiraan dad laga dambeeyo, hasayeeshe badankood iskooda u dawarsadaan.
L´aanta Ekot ayaa ka qeyb qaadatay warbixin sir ah oo loo diray dhamman boolisyadda waddanka oo ku saabsan wixii ay sameeyn lahayeen hadii ay la kulmaan qof tuugsanaya. Macluumaadkan ayaa ah in islamarkiiba sawir laga qaado, sido kale la sawiro kaadkooda aqoonsiga ah, dabeetana la weeydiiyo dhowr suaalood oo la xidhiidha sababta ay Iswiidhan u joogaan. Tusaalahan magaalada ay ka yimaaden, dadka ay halkan la yimaadeen, magacyadda qooysaskooda, iyo telefoonkooda.
Doode Hans Caldaras oo ah room Iswiidhan ku nool ayaa waayo aragnimo u leh diwaangelinta qoomoyada roomerka ah lugu sameeyo.
-Waa midabtakoor in sidan gaarka ah noo baadho .Waxaana soo xasuusta waagi u booliska goboolka Skåne baadhitan kan la dhigma ku sameeyeen dadka roomerka ah, ayuu sheegay.
Linda Staaf ayaa hogaamiye ka ah ciidamada sirdoonka ee iswiidhan.
-Hadii aan qof ka shakino, tusaalahan in u khatar ku suganyahay wa in aan joojino oo suaalahan weydino si an u caawino, ayey sheegtay. Wexeey raacisay:
-Hadii aanu boolisku dadkan suaalahan weydiin, yaa caawinaya oo ogaanaya xaaladooda?
Staaf ayaa u jeeda in u boolisku ku saxsanyahay diwaangelintan oo aan sharci jabin ahin. Waa sida ay iyadu hadalka u soo dhigtay.